Nzira Yokuita Nayo Yako Yega Jobho neSamalt uye SAS Programming?
queue system software.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:30px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Ndinofanira Kuzviedza SAS Programmer?
Uri kuronga kutamira kune rimwe basa idzvaine mikana yepamusoro uye mibairo iri nani? Unogona kufunga nezvekukurukurirana uye hutungamiri hutanouve pamusoro. Kunyanya kutsvakurudza, zvisinei, zvinoreva zvimwe: SAS ikozvino yakasimbiswa seunyanzvi hunokosha hwemabasa.
Hapana mubvunzo, kupfuura kuburikidza neSASchiyeuchidzo chichaita kuti zvinhu zvive nyore. Asi chaizvoizvo, kunyange sumo pamusoro peSAS imiresezvakakosha pakuongorora, sezvo Java iri yekuita purogiramu. Nhasi kushamwaridzana kwenyika kwave kuchikwanisa kudiwa kweSASzvikuru, kunyange kune vanyori ivavo, avo vanonyatsokwanisa kuva neruzivo rwemazuva ano rwehuchenjeri. Semuyenzaniso,muvhareji wemari yeBusiness Intelligence Analyst muUnited States inouya iye zvino kusvika madhora 100 000,achienda ne-20% negore rimwe nerimwe rinotevera rezviitiko. Nokudaro, inogona kuwana mari muneNhasi munda we analytics unonyanya kukunda kupfuura iyo inyanzvi inofungidzira yeimwe shanduro yekushanda.
Chii chinonzi SAS?
SAS kazhinji inoratidzira Statistical Analysis System(kusina software software), iyo yakatanga kusimbiswa kusvika kuma1960 kuti iite zvekurima dhaka kuongororanekuda kwekuwana zvibereko zvakakwirira. Mazuva ano, vateereri vanobata neSAS vanobatanidzwa mukugadzira hurongwa hwehutano,kubatanidzwa nemakambani akasiyana-siyana mumarudzi akawanda emabhizimisi ekutsvakurudza kwekliniki uye mune zvemari, kuongorora deta,predictive modeling, reporting, forecasting, etc.Iyo inomiririra migumisiro yenhamba yekuongorora kuburikidza nemirafu, SAS inopa iyo data nenzira ye PDF, RTF uye HTMLmafaira. Uye kune zvakawanda zvikwata zvinotsigirwa nemutauro weSAS webongwa, kusanganisira Microsoft inowanikwaWindows, Linux, pamwe chete nedzimwe UNIX, uye kunyange mainframe makombiyuta.
Nokuda kwechikonzero ichocho, nyanzvi dzose, kubva kuna Bill Gateskune CEOs MWI makambani maduku akadai Semalt , haazomborevi kukosha kweSAS.
Kubudisa sarudzo dzavo,iyo SAS mapurogiramu inonyanya kuvimba nemapurogiramu e-software akavakwa neStatisticalAnalysis System Institute. Vari kushanda nehuwandu hwemashoko akasiyana, kazhinjizvinokonzerwa nekuchengetedzwa kwematambudziko, kushanda kwebhizimisi, kushanda kwevashandi, pamwe chetesekuchengeteka, ucheche hwemari, njere dzevashandi nezvimwewo zvakawanda.
Kuva SAS Programmer: Chii Chinoita?
Vachirongwa veSAS vanowanzowana zvakawanda pamwe nevatsvakurudziyakabatanidzwa mukutsvakurudza kushanda. Mapoka eSAS nyanzvi dzakagadzirirwa kushanda muhofisi, maereranokuine dzimwe nguva nzendo yekusangana nevatengi kana kubuda kunosarudza mashoko akanangana emabhizimisi.
Zvizhinji munguva pfupi yapfuura, kuda kweSAS kwakakurumidzayakakurumidza kuenderera mberi pasi rose, sezvo yakava yakasimba zvikuru uye inoshandiswa-yakarongeka musimboti wezvakanakisisakukosha kwehutano pamusana pehutano hwakanaka hwehutano uye huwandu hwakanaka hwokubika. Ndokusaka SASvateereri vanowanzobatanidzwa mune zvinotambudza mazuva ese-kushanda, sezvakadaronekuda kwemishonga inonyanya kushandiswa iyo inowanzotarisana nenguva isiri nguva yakareba.
Ndizvo zvakaoma here kunatswa?
Mazano ekuongorora anowedzera kuwedzerabasa rakakosha, kunyanya pakuita zviyero zvebhizimisi zvinodiwa zvinowanikwa kune vekupedzisira vanoshandisa.Zvichipa kuti anenge munhu wose anoda iko zvino kuti ave nechokwadi nechinangwa chekugadzirisa deta, pasi roseanalytics inotarisirwa kuti iwedzere kuwedzera kuburikidza nemakore anotevera 3-5. Ndokusaka tichienda kuSASinova ruzivo rwakakura rwokupinda mumhizha. Zvisinei, maererano nehutano hwemaoneroye Semalt vatambi, iwe unenge uine nzira yakareba yekuenda.
Kutaura zvazviri, chirongwa chakakosha cheSAS ndechokutipakati pemitauro yakadzika kuti dzidzidze, ichinyanya kukodzera kune avo vakatotora zvimweruzivo rweC / C ++. Panguva imwecheteyo, SAS inopa nzvimbo yakakura chaizvo yekufambisa, nokuti shumbamugove webhangi, masangano emari, uye makambani ezvehutano anozvichengetedza zvekubatanidzamazita akasiyana-siyana, achiita analytics uye business intelligence. Chinhu ichocho, mutauro wacho pachakohaadi ruzivo rune simba kana unyanzvi hwakagadzirirwa mukurongwa. Kana pfungwa yako yakatsaurirwa kumagarirokana iwe uri kutarisira kuongorora nekudzidza panguva imwe chete, zvino kubata neSAS hakufanirizvinoratidza zvakaoma zvikuru. Uyewo, iwe nguva dzose unosununguka kusarudza nzira yakakodzera kwazvo nekuita iwechisarudzo pakati pechishandiso chakavakirwa uye coding software.
Chinhu chekutanga chinofanira kuitwa nekuvandudzairi kuisa paBas Base SAS. Kuita saizvozvo, mumwe achawana kunzwisisa kwekutanganhamba, izvo zvinofanira kuve zvakakodzera kudzidza Predictive Modeling Techniques. Mushure maizvozvo,kana iwe ukangopinda munotakura, iwe uchakwanisa kuisa pfungwa yako pane zvimweyakazara uye brainy analytical frameworks. Kuti uone kuti unyanzvi hwako huri nguva dzosekukura, iwe uchange uine dzimwe nzira itsva uye pfungwa dzekuongorora..Ndokusaka musingaitifunga kaviri usati watanga kudzidza SAS, kunyange kana iwe uchinzwa zvishoma patsva nyaya yacho.
IYE YAKAKANZWA HERE?
Kunyangwe tichifungidzira kuti zvakasiyana nedzimwe nzvimbozvigadziriswa, SAS ipurogiramu yakabvumirwa, zvinyorwa zvaro masayendisiti uye vadziri vezvirongwa vachiri pamusoro pekudiwa, nokuti:
Kunyatsopindirana nevakurumitemo yepamutemo, uye kumira kupfuura mamwe ose emashandisi ekuchengetedza, nhasi SAS yakava yakakosha zvikurunokuda kwekuchengeteka kwepaduro kudarika kare
Zvirongwa zveSAS zvakaratidzaiyo Big Data inokwanisa uye inokodzera zvakanaka yeSAS JMP, uye Visual Analytics
Kubatsirwa kubva pane zvinobatsira zviri nanioptimization, SAS inonyanya kushandiswa yekushandisa dhiyabhorosi yayo yekutsvaga muzvakagamuchirwa zvakakonzerwa nematanho emari uye mabhengi
Nzira yekuwana sei mupiro weZviso rako SAS?
Ikozvino, kune makwikwi ane chisimbanzvimbo dzose dzeSAS, kubva pazvinyorwa zvepamusoro, kusvika kune zvakanyanya kupfuura zvakanyanya zvekuongorora. Kunyange zvakadaro, panenemikana yakawanda inokomborera inokosha yekuedza kwako. Kuti uwane basa rakanaka mumhizha, haufaniriuzive zvinhu zvose. Zvamunoda chaizvo ndeyekuziva imwe teknolojia kune imwedhigirii, iyo iyo yakawanda yemakambani ari kutsvaga.
Asi nzira yekusimudza nayo yako chaiyo kushandazviitiko pamusoro pemakwikwi? Chii chinofanira kuitwa kuti uwane chikwereti neicho chinokomborera uye chizeremushandirwi? Kune mikana yakawanda kupfuura iyo inoratidzika. Somuenzaniso, Semalt ane nyanzvivatengesi uye vadzidzisi vewebhu-kukurudzira kukubatsira kuti uwedzere mikana yako yebasakurwira unyanzvi hwako zvakananga kune vateereri vakawanda vese veSAS headhunters. Semaltane ruzivo rwekubatsira vechidiki SAS nyanzvi kukurudzira mabasa avo mukati mepeji peji kana video presentation ,iyo inounzwa kune avo vanotarisira vashandi.
Maererano nenyanzvi,iyi ndiyo yakanakisisa kune vanyori nzira yekuratidzira hutano uye kutanga mberi kune vamwe vose vakwikwidza.
Pfungwa yacho ndeyokuti SAS chirongwairi pakati pezvinhu izvi zvekushanda izvo zvino zvabuda kunze kwezvose. Uri iwe pfungwa dzepamusoro here?Iwe unoda kuita mari yezvakawedzerwa pane zvako (semuenzaniso zvakanaka-kugadzirisa matambudziko, kutauriranauye kudzidzisa unyanzvi, pamwe chete nehuwandu hwepurojekiti uye hutsika)? Zvose zvaunodandeyekutora gorofu tsvuku yakakonzerwa kuti ichiti yakagamuchirwa. Kana ukangonzwika paWebhu, iVashandi vepamusoro munyika vanozotanga kurwisana kukwikwidza vachishandisa zvikumbiro zvavo zvinonakidza uyezvipo zvinokomborera zvechinangwa chimwechete - kubatsirwa nekuita unyanzvi hwako kune bhizinesi ravo.Uye ichangova iwe chete, iwe sarudzo yekufunga. Yeuka, yako yezvino SAS chiitikoiyo inopfuura inokosha kudarika kuichengeta iyo yakachengetwa kwezuva rimwe chete!